Kedu ihe bụ HTML Text Extractor? - Ntụle ihe omimi
Nchịkọta ihe ederede HTML bụ ụzọ dị mfe iji lelee ma chekwaa ederede nke ibe weebụ.Site na ngwá ọrụ a, ịnwere ike iwepu akwụkwọ HTML ma nweta ozi bara uru na ihe nke sekọnd. Ọ bụrụ na ị na-enwe nkụda mmụọ n'ihi na saịtị nwere ederede a na-enweghị ike ịhọrọ ma na-achọ ihe ngwọta ziri ezi, HTML extractor extractor is the right choice for you - windows rdp hosting.
Ihe odide ederede HTML nwere ọtụtụ atụmatụ. A tụlere ụfọdụ n'ime ha n'okpuru ebe a.
1. Kwesịrị ekwesị maka programmers
Maka ndị mmemme na ndị na-abụghị onye na-eme programmers, HTML extractor extract will extract codes and text from web pages desired. Ịkwesighi inwe usoro mmemme iji jiri ngwá ọrụ a. Kama nke ahụ, ịchọrọ ịmara ihe gbasara HTML na Eke Ọgba iji nweta ọrụ gị. Ngwaọrụ a abụghị naanị maka ndị mmemme ma kamakwa ụlọ ọrụ, mmalite, ndị nta akụkọ, na ụmụ akwụkwọ.
2. Ihe ntinye ederede HTML maka onye mmebe weebụ
Onye na-emepụta weebụ na-arụ ọrụ maka ịmepụta aghụghọ na ịmepụta ibe weebụ maka ndị ahịa ya. Ọ bụrụ na ị bụ onye mmepụta weebụ ọkachamara ma nwee ọtụtụ ọnụọgụ HTML iji wepu, ị ga-anwale ederede HTML. Ngwaọrụ a na-eme ka nchekwa gị na nzuzo gị na ịntanetị, na-enye gị data nke ọma. Ọzọkwa, ọ na-achịkọta ma na-ewepụta ihe ọmụma site na ihe oyiyi na vidio, na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịmepụta ihe atụ.
3. Ihe ntinye ederede HTML maka sistemụ arụmọrụ
Otu n'ime ihe ndị kasịsị iche iche nke ederede HTML bụ na ọ na-agba na usoro Windows niile. Ọzọkwa, ngwá ọrụ a nwere ike ejikọta na ihe nchọgharị weebụ ọ bụla ma dịkwa mma maka ndị ọrụ nke Windows 98, Me, 2000, NT, Vista, XP, 7 na 8. Ọ ga-ewepu faịlụ gị ma wepụ ederede na nghazi ọ bụla.
4. Ọ na-emepụta ma na-elekọta ndị ọrụ na edemede
Site na nchịkọta ederede HTML, webmasters nwere ike ịmepụta na jikwaa ma ihe ederede na ndị nnyemaaka. Ọ na-ebute omume nhazigharị dị oke mma ma na-arụ ọtụtụ ọrụ maka ndị ọrụ ya.
5. Ị nwere ike gbanwee data a na-emeghị ka ọ bụrụ ozi dị irè
Site na nchịkọta ederede HTML, ị nwere ike ịgbanwere data ndị a na-emebeghị iji nweta ozi bara uru na nke a pụrụ ịkọwa nke ọma. Ịkwesighi ịmepụta ihe ọ bụla iji mepụta ngwá ọrụ a. Ọ ga-ebu ụzọ nyochaa akwụkwọ HTML gị ma nyekwa ma ọ dịkarịa ala 40 normalization ndebiri iji họrọ, na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịbubata data gị.
6. Ezigbo ebe nrụọrụ weebụ
New York Times, CNN, BBC na Washington Post bụ ụfọdụ n'ime ebe nrụọrụ weebụ kachasị ama ama.Site na nchịkọta ederede HTML, ị nwere ike wepụ data site na saịtị ndị a n'ụzọ dị mfe. Ọ ga-enye gị nsonaazụ ọma ma dozie obere ihe na obere njehie. Site na ngwá ọrụ a, ị nwere ike ịmepụta ọdịnaya dị mma ma mee ka ọ bipụtara na ebe nrụọrụ weebụ gị maka njikwa ogo search engine.
7. Atụmatụ nkwụnye mgbanwe
Ikpeazụ ma ọ bụghị nke kachasị, HTML extractor extract dị mma maka startups na-abịa na iche iche iche atụmatụ. Dị ka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịhọrọ atụmatụ ya ma ọ bụrụ na ị nwere blog onwe gị ma ọ gaghị enwe ike ịzụta ọnụ ahịa ego. Atụmatụ a ga-efu gị $ 20 kwa ọnwa ma wepụ ọtụtụ ibu ọrụ na nhọrọ maka gị. Otú ọ dị, a na-enwekwa ikpe ikpe ụbọchị 14 ya.